Annaga nagu saabsan - Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
Shirkaddayadu waxay leedahay warshad u gaar ah, kaas oo daboolay ku dhawaad ​​12,000 mitir oo laba jibbaaran, oo leh in ka badan 300 oo shaqaale ah, waxay leedahay qalab kala duwan oo horumarsan oo sarreeya iyo qalabka tolida, wakhtiga hogaanka wax soo saarka waa 20-40 maalmood, wareegga samaynta muunad waa 1- 7 maalmood, wareegga muunad ee ugu dhaqsaha badan wuxuu noqon karaa 1 maalin isla marka aan helno shuruudaha. 25-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan si joogto ah ugu adkeysanay tayada iyo waqtiga gaarsiinta. Aragtida macaamiisheena waa iskaashiga guul-guul iyo abuurista wadajirka ah ee mustaqbalka. Waxaan aaminsanahay in iskaashigayagu uu hubaal ka caawin doono arrintaada mid aad u wanaagsan!
Boorsada Quanzhou Camei waxaa la aasaasay 2003, taas oo ah warshado iyo ganacsi ganacsi, oo ku takhasusay horumarinta, wax soo saarka, iibinta bacaha iyo qalabka waraaqaha. Waxaan ka gudubnay shahaadooyinka ISO9001, BSCI, SEDEX, iyo sidoo kale xisaabinta shirkado badan oo caan ah oo ajnabi ah (sida Walmart, Depot Office, Disney, iwm.). Alaabadayada waxaa inta badan lagu sameeyaa shaqada 2: shaqada soo noqnoqda ee ugu sareysa sida bacaha xereynta, giraanta giraangiraha, boorsada qalin, boorsada qalin, bacda kaydinta; ee shaqada tolida sida faylalka, jilbaabka binder, kiish qalin, bacda wax iibsiga, bac la isku qurxiyo, bac computer iwm Shirkadeena waxay leedahay awoodaha madax banaan ee design iyo horumarinta, waxaa jira tiro balaadhan oo ah bacaha waraaqaha, style cajiib ah, tayo sare leh. Loo dhoofiyo dalal iyo gobollo badan sida Yurub, Maraykanka, Japan, iwm. Waxay heleen sumcad aad u wanaagsan caalamka.
Markii uu kobcay COVID-19, dhaqaaluhu hoos buu u dhacay. Xaaladdan oo kale, shirkadaha qaar ayaa hakiyay socodsiinta, si kastaba ha ahaatee, Camei kaliya ma dammaanad qaadayo hawlgalka si caadi ah, laakiin sidoo kale waxay diiradda saaraan horumarinta nafteena iyada oo loo marayo cilmi-baarista iyo horumarinta alaabada iyo cusboonaysiinta maamulka gudaha si loo bixiyo adeeg hufan oo dhamaystiran macaamiisha ka dib faafitaanka.
In 2020 sano, Camei waxa uu heshiis la saxeexday Beijing Changsong Consulting Co., Ltd. si ay u bixiyaan tababar nidaamsan ee dhammaan maareeyayaasha adeegga. Shaqaale kasta oo hawl maamuleed ayaa barta oo ku koraya tababarka, kor u qaadaya awoodda maamulka. Tani waxay ka dhigaysaa shirkadda sida si ka hufan sidii hore, tayada shaqaalaha ayaa la wanaajiyay.Si aan si wanaagsan ugu adeegno macaamiisha oo aan si dhaqso leh ula macaamilno waxyaabaha shaqada.